Badminton – « Mada Simple 2019 »: niakatra ny lentan’ny sokajy lehilahy | NewsMada
Badminton – « Mada Simple 2019 »: niakatra ny lentan’ny sokajy lehilahy
Tontosa ny faran’ny herinandro teo, tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara 2019 ho an’ny olon-tokana, taranja badminton. Niakatra ny lentan’ny mpilalao tamin’ity taona ity, indrindra ny sokajy lehilahy, araka ny fanazavan’ny filohan’ny federasiona malagasy ny badminton, Ravalison Jean Aimé. Raha hiverenana ny voka-dalao, nisongadina ny mpilalaon’ny Saint Michel Itaosy, ho an’ny “Série B” lahy sy vavy, nanao pao-droa ity klioba ity. Nolavoin-dRazafinimanana Miangola (St Michel) tamin’ny seta 2 no ho 1, Ramanandraisoa Sahondra (Baobad). Teo amin’ny lehilahy kosa, nomontsanin’i Rinamalala Urlich (St Michel), tamin’ny seta 2 no ho 0, Rakotondramanana Olivier (VTTK Ivato). Fa isan’ny niady ihany koa ny fifanandrinana ho an’ny “Série A” izay nahitana ny fahaizan’ireo mpilalao, indrindra ireo avy niatrika fiofanana tany Sina, toa an-dry Ludovic sy ry Asminah Epiphanie. Toy izao kosa ny voka-dalao hafa, U13 (V): Stecy (Sporting Club) 2-1 Ravakiniaina (Sporting Club)/U15 (V): Fanirihasina (Sporting Club) 2-0 Tifanie (VTTK Ivato)/U15 (L): Haja (St Joseph) 2-0 Tsiky (St Joseph)/U17 (V): Jalicia (Baobad) 2-0 Tsiory (ABC)/U17 (L): Narindra (St Michel Itaosy) 2-0 Nandos (Baobad)/Série C (V): Sandy (St Michel Itaosy) 2-0 Jessica (VTTK Ivato)/Série C (L): Jonathan (St Joseph) 2-1 Todisoa (St Michel Itaosy)/Série B (V): Miangola (St Michel Itaosy) 2-1 Sahondra (Baobad)/Série B (L): Urlich (St Michel Itaosy) 2-0 Olivier (VTTK Ivato).
Mangataka fanohanana amin’ny fanjakana
Araka ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny federasiona, maro ny fifaninanana iraisam-pirenena tokony handaraisan’i Madagasikara anjara, saingy noho ny tsy fahampian’ny enti-manana dia tsy afa-manoatra. Isan’ny hahafahan’ireo mpilalao malagasy mampiakatra ny lentany anefa ny fiatrehana izany, na eo anivon’ny ranomasimbe Indiana fotsiny aza. Mangataka, araka izany, ny federasiona mba hanohanana ity taranja ity, efa mihamanana traikefa rahateo isika ary efa manana fitaovana avo lenta, saingy ny fiatrehana fifaninanana iraisam-pirenena no tsy ampy, hoy hatrany ny fanazavana.
Eo amin’ity taranja ity hatrany, ny 18 sy 19 janoary izao no hanatanterahana ny fifaninanam-pirenena 2019 ho an’ny olon-droa. Aorian’izay, hatomboka ny taom-pilalaovana 2020 ka hisy ny lalao fanokafana.